Global ESP Emailvision zụtara Social Media Platform Ebumnuche Marketer
Anyị enweela obi ụtọ izute ma soro ndị isi na ụlọ ọrụ abụọ a rụọ ọrụ n'afọ gara aga: Emailvision na Ebumnuche Ahịa. M kọọrọ na Emailvision tupu afọ ahụ n'ihi na ha nwere mmasị na ha imekọ ihe ụwa mgbalị. Ngwa ha abụghị naanị ụwa, yabụ oge mpaghara… gbadaa rue onye debanyere aha!
Companylọ ọrụ ahụ na-enwe ihe karịrị 40% afọ na-eto eto karịa afọ na ngwa ngwa na-eto n'ime ahịa na South America na Asia, mgbe oke ahịa kesara Europe. Na ahịa hispanic email na ịrị elu na United States, Emailvision nọ n'ọnọdụ nke ọma iji nye ESP ebe a na United States na-agba ọsọ maka ego ha. Ọ bụghị naanị na ha na-akwado ọtụtụ asụsụ asụsụ site na interface ha, ha na-akwado ha na njikwa akaụntụ ha na ndị ọrụ ọrụ ndị ahịa!
Anyị nwekwara ohere ịhụ ngosipụta zuru oke nke Ebumnuche Ahịa site n'aka onye nchoputa Amita Paul. Amita bu onyinye di itunanya - ma ghota otu ndi ahia ji etinye data na ihe ha kwesiri iji soro ya. Ebumnuche Ebumnuche bụ ngwa ọrụ nke ụlọ ọrụ na-eji na-ahazi mkparịta ụka mgbasa ozi ha na-elekọta ma na-agbaso okporo ụzọ ahụ na saịtị ha. Ọ bụ a eluigwe na ala ngwá ọrụ nwere njikọ na Twitter, Facebook, Ping.fm… na ohere plugin ihe ọ bụla na-elekọta mmadụ na-abịa na-esote. Ọ na-enyere aka na Guy Kawasaki bụ onye otu ndị isi!
Anyị mụtara n'oge na-adịbeghị anya na (aha ọhụrụ) Emailvision zụrụ Ebumnuche Marketer! Ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ihe mmekọrịta dị n'etiti teknụzụ ndị a nwere na-echekwa n'akụkụ nkuku!
Ekele diri ndi otu abuo. Nick Heys na ndị otu ya na Clichy, France, bụ ụfọdụ ndị ịtụnanya na ụlọ ọrụ ha na-aga n'ihu na-enwu ụzọ dị na mbara ụwa a. Ijikọta talent a na ọhụụ Amita bụ ihe na-atọ ụtọ n'ezie! Ọ bụrụ na emechara ọfụma, ejiri m n'aka na Emailvision nwere ike ịbụ onye na - eweta ọrụ email kachasị n'ụwa niile n'ime afọ ole na ole.
Tags: emailemailvisionnick heysebumnobi marketerelekọta mmadụ medianlekota oru mgbasa ozi